BEIJING, Chivabvu 7 (Xinhua) - kutengeswa kwezvinhu kunze kwenyika kuChina zvakawedzera munaKubvumbi, zvichizowedzera kune chiratidzo chekuti kutengeserana kwenyika yekune dzimwe nyika kuri kugadzikana pakati pechimwe chinhu cheCCID-19.
Kunze kwenyika kwakakwira 8.2 muzana gore pagore kusvika 1.41 trillion yuan (anenge 198,8 mabhiriyoni emadhora emadhora) munaKubvumbi, zvichienzaniswa nekudonha kwegumi nepfumbamwe muzana muzana muzana rekutanga, General Administration of Forodha (GAC) yakataura neChina.
Kunze kwakadonhedza 10,2 muzana kusvika ku1.9 trillion yuan mwedzi wapfuura, zvichikonzera kutengeserana kunowedzera kwe 318.15 bhiriyoni yeuan.
Kunze kwekutengeserana kwezvinhu zvakadzika pasi pe7.7 muzana gore pagore muna Kubvumbi kusvika 2,5 trillion yuan, zvichiderera kubva pakudonha kwe6,4-muzana muQ1.
Mumwedzi mina yekutanga, kutengeserana kwekunze kwekutengesa zvinhu kwakawedzera 9.07 trillion yuan, pasi 4.9 muzana gore pagore.
Kudzokorora kwezvinhu zvinotengeswa kunze kwenyika kunoratidza kusimba kwakasimba kwehupfumi hweChina uye kudiwa kwekunze kwezvinhu zvakagadzirwa neChina, akadaro Zhuang Rui, mutevedzeri wemukuru weInstitute of International Economy paUniversity of International Business and Economics.
Nyika yekutengeserana kwekunze yakatora hit kubva kuCCIDID-19 mafekitori akavharwa uye mauto ekunze akaramba.
Bucking maitiro, China kutengeserana ne ASEAN uye nyika pamwe Belt uye Road yakaramba yakasimba kukura.
Munguva yaJanuary-Kubvumbi nguva, ASEAN yakachengeta mutengesi mukuru weChina wekutengeserana nemabhizimusi anosvika zviuru zvishanu kubva muzana pagore kusvika 1.35 trillion yuan, zvichireva kuti 14.9 muzana yehuwandu hweChina hwekunze hwekutengesa kunze.
Yakasanganiswa kutengeserana nenyika pamwe neBelt uye Road yakatora 0,9 muzana kusvika 2.76 trillion yuan, zvichidudzira makumi matatu neshanu muzana ezvio, kuwedzera kwe1.7 muzana mapepa gore pagore.
Kunze uye kutumira kwezvinhu kunze kwenyika neEuropean Union, United States neJapan kwakadzikira panguva iyi, data reGAC rakaratidza.
Mabhizimusi akazvimiririra ndiwo akakonzera zvakanyanya kutengeswa kwekunze kweChina mumwedzi mina yekutanga, ihwo huwandu hwayo hwekutengesa kune dzimwe nyika hunowedzera ne 0.5 muzana kusvika 3,92 trillion yuan.
China yakaparura hurongwa hwekubatsira mabhuroka ekutengesa ekunze kuti atange kugadzira zvakare mukati meCCID-19.
Kukurudzira kwakaunzwa kucheka mutengo wemafemu uye kuvabatsira kuti vakwanise kutenga zvakachipa, nepo maitiro ehurongwa pamisangano akagadzirwazve kukurudzira kutengeswa kwezvinhu zvekunze uye kunze.
China-Europe zvitima zvinotakura zvinhu zvazove nzira yakakosha yekuita zvekutengeserana zvakapusa kunge mhepo, gungwa uye zvekufambisa mumigwagwa zvakakanganiswa zvakanyanya nedenda.
Kubva muna Ndira kusvika muna Kubvumbi, zvitima zviviri zve9920 zveChina-Europe zvakafambisa zvinotakura zvinhu zve262,000 TEUs (20-tsoka dzakaenzana zvikamu), makumi maviri neshanu muzana makumi maviri neshanu kubva muzana kubva pagore, zvichiteerana.
Vacherekedza kuti dambudziko iri raunza kusagadzikana kwekutengeserana, Ni Yuefeng, mukuru weGAC, akati nyika ichaenderera mberi nekuvandudza chirongwa chayo chekurwisa maitiro eCCIDID-19 nekusimudzira kusimudzira kwenguva refu kwekutengeserana kwekunze.
Kwayaka: Xinhua Net